KDEApps2: Na -aga n'ihu na -enyocha ngwa KDE Community | Site na Linux
Na nke a nke abụọ «((KDEApps2) » site n'usoro isiokwu dị na "Ngwa KDE Community" Anyị ga-aga n'ihu nyocha nke katalọgụ nke free na-emeghe ngwa nke ha mepụtara.
Iji mee nke a, gaa n'ihu na -agbasawanye ihe ọmụma gbasara ha nye ndị ọrụ niile nke GNU / Linux, ọkachasị ndị nwere ike ha anaghị eji «KDE Plasma » dị ka «Desktọpụ Environment» isi ma ọ bụ naanị.
1 Banyere KDE na ngwa ya
2 KDEApps2: Ngwa maka Mmụta
2.1 Mmụta - Ngwa KDE (KDEApps2)
2.1.1 Ngwa 10 kachasị elu
2.1.2 Ngwa ndị ọzọ dị
Banyere KDE na ngwa ya
"Obodo KDE bụ otu mba ofesi na -emepe ma na -ekesa sọftụwia mepere emepe. Obodo anyị ewepụtala ngwa dị iche iche maka nkwukọrịta, ọrụ, agụmakwụkwọ na ntụrụndụ. Anyị na -etinye nlebara anya pụrụ iche n'ịchọta ihe ngwọta ọhụrụ maka nsogbu ochie na nke ọhụrụ, na -ekepụta ọnọdụ siri ike na nke mepere emepe maka nnwale. " Kedu ihe bụ KDE?
KDEApps2: Ngwa maka Mmụta
Mmụta - Ngwa KDE (KDEApps2)
Na mpaghara a mmụta, na "Obodo KDE" amalitela n'ihu ọha Ngwa 25 nke anyị ga -ekwu maka ya na ịza ajụjụ ya, n'ụzọ ederede na nkenke, 10 mbụ, mgbe ahụ anyị ga -ekwupụta 13 ndị fọdụrụ:
Articulate: Onye nkuzi ịkpọpụta okwu nke na -enyere aka melite na nụchaa ịkpọpụta asụsụ mba ọzọ site n'aka nwa akwụkwọ.
Gbapụrụ agbapụ: Egwuregwu elektrọnik bipụtara na 1978 nke na -ama ndị egwuregwu aka icheta usoro nke ogologo na -abawanye.
Cantor: Ihe ngosi maka nchịkọta mgbakọ na mwepụ siri ike. Cantor na-ejikọ ha na KDE Platform ma na-enye ọmarịcha ngwa ọrụ dabere na akwụkwọ ọrụ.
GCompris: Otu setịpụrụ mmemme mmụta dị elu nke nwere ọtụtụ ihe omume maka ụmụaka dị n'agbata afọ 2 na 10.
KAlgebra: Ngwa nwere ike dochie ihe mgbako eserese gị. Ọ nwere ọrụ ọnụọgụ, ezi uche, akara na nyocha nke na -enye gị ohere ịgbakọ okwu mgbakọ na mwepụ na njikwa wee gosipụta eserese na nha 2 ma ọ bụ 3.
calcium: Mmemme na -egosiputa okpokoro oge nke ihe. Ị nwere ike iji Kalzium chọta ozi gbasara ihe ọkụkụ ma ọ bụ mụta gbasara tebụl oge.
Kanagram: Egwuregwu dabere na anagrams okwu: a na -edozi ihe mgbagwoju anya mgbe eweghachiri mkpụrụedemede okwu agwakọtara n'usoro ziri ezi.
KBrush: Obere mmemme iji were irighiri ihe na ụzọ ụzọ mee mgbako. Iji mee nke a, a na -enye mgbatị ahụ dị iche iche ma ị nwere ike iji ọnọdụ mmụta wee were ụmụ irighiri ihe mee ihe.
KGọgrafi: Ngwa mmụta mmụta ala na -enye gị ohere ịmata ngalaba ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ụfọdụ (ngalaba, isi obodo nke ngalaba ndị a na ọkọlọtọ ha, ma ọ bụrụ na ọ dị).
KHangMan: Egwuregwu dabere na ihe egwuregwu hangman ama ama. Emebere ya maka ụmụaka gbara afọ isii gbagowe. Egwuregwu a nwere ụdị okwu dị iche iche a ga -eji egwu ya, dịka ọmụmaatụ: anụmanụ (okwu metụtara anụmanụ) na ụdị atọ nke ihe isi ike dị iche iche: dị mfe, ọkara na ike.
Ngwa ndị ọzọ etolitela na mpaghara a mmụta site na "Obodo KDE" bụ:
Akwa: Jiometrị mmekọrịta.
Kiting: Akwụkwọ ntụaka / ihe ọmụmụ Japanese.
Uchechi: Mụta mkpụrụedemede.
KmPlot: Plotter nke ọrụ mgbakọ na mwepụ.
Kst: Ngwá ọrụ maka iji anya nke uche hụ na ịhazi atụmatụ nnukwu data ozugbo.
Malite: Planetarium maka desktọpụ.
KTouch: Onye nkuzi na -ede akwụkwọ.
KTurtle: Ebe mmemme agụmakwụkwọ.
KWordQuiz: Onye na -azụ kaadị.
Ụlọ nyocha: Eserese na ngwanrọ nyocha data.
marble: Ụwa mebere.
Nkeji: Software mmụta egwu.
Parley: Onye nkuzi okwu.
Rocs: Rocs eserese tiori.
Nzọụkwụ: Ihe mmekọrịta anụ ahụ mmekọrịta.
Na nkenke, na nke a ndezigharị nke abụọ "(KDEApps2)" nke ngwa ukara dị adị nke "Obodo KDE", na ọkachasị ndị nọ n'ọhịa mmụta, anyị nwere olile anya na ịmara na itinye ụfọdụ n'ime ndị a n'ọrụ ngwa ọdịnala banyere dị iche iche GNU / Linux Distros na -enye aka n'iji na njupụta nke siri ike ma dịkwa egwu ngwanrọ software lee ka o si maa mma ma na -arụsi ọrụ ike Obodo Linuxera na -enye anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDEApps2: Na -aga n'ihu na -enyocha ngwa KDE Community